विजयी भवः « paniphoto
« एक पन्थ, दो काज : दुध बेच्दै ड्युटीमा हिमाल शर्माको त्याग वास्तविक थियो कि नाटक ! »	विजयी भवः
By -पानीफोटो- on Thursday July 21, 2011	जोर्डनसँग विश्वकप यात्राको दोस्रो चरणको खेल खेल्न नेपाली टोली आज जोर्डन गएको छ । बेलायती प्रशिक्षक ग्राहम रोबर्टसको प्रशिक्षणमा इतिहासमै पहिलो पल्ट विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण पुगेको नेपाली टोलीमा बलियो आत्मविश्वास देखिएको छ ।
जोर्डन प्रश्थानमा नेपाली टोली । तस्विर : इकान्तिपुर
नेपाल अहिले फिफा वरियतामा एक सय ४८ औँ स्थानमा रहेको छ भने जोर्डन ८४ औँ स्थानमा छ । जोर्डन माथिल्लो वरियतामा भएपनि उसँग जित निकाल्ने कुरामा प्रशिक्षक रोर्बट पनि आशावादी छन् । एउटा ऐतिहासिक जित हाशिल गरेको राष्ट्रिय टोलीलाई अर्को इतिहास रच्न सबैको आशिर्वाद छ, विजयी भवः रोर्बट योजना‘जोर्डन पक्कै पनि राम्रो टोली हो, तर हामी उनीहरूसँग आत्मसमर्पण गर्न त्यहाँ जान लागेका होइनौं। पहिलो लेगमा हामी उनीहरूसँग गोलरहित बराबरी खेल्नेछौं, त्यसपछि दोस्रो लेग जितेर समूह चरण सुरक्षित गर्नेछौं।’ग्राहमकै नेतृत्वमा पहिलोपटक विश्वकप छनोटको दोस्रो चरण पुगेको नेपालले प्लेअफको दोस्रो चरणमा जोर्डनविरुद्ध दुई लेगमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो लेग शनिबार जोर्डन तथा दोस्रो लेग बिहीबार दशरथ रंगशालामा हुनेछ। कमजोर तयारीप्रति असन्तुष्ट भए पनि ग्राहम जोर्डनमा बराबरी खेलेर घरेलु मैदानमा विजय पाएर समूह चरण पुग्ने सोचमा छन्। तथापि बलियो जोर्डनसँग सोचेजस्तो नतिजा ल्याउनु कठिन हुने पनि उनले राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले आफूसँग प्रस्ट योजना भएको उनी बताउँछन्। Tweet
« एक पन्थ, दो काज : दुध बेच्दै ड्युटीमा हिमाल शर्माको त्याग वास्तविक थियो कि नाटक ! »	7 comments to विजयी भवः
· जवाफ दिनुहोस्	we can win.
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	chandramani pokhrel
· जवाफ दिनुहोस्	हामी जित्छौं ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	भैरव हुमागाई
· जवाफ दिनुहोस्	हामी पक्कै जित्छौं ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	adim biru
· जवाफ दिनुहोस्	yes! we win.
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Rimjhim
· जवाफ दिनुहोस्	YES!WEWILLWIN
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	love nepal
· जवाफ दिनुहोस्	बोलेर जितिने होइन साथी